Wararka - 10 -ka Isticmaal ee Shaaha ugu Fiican oo aadan aqoon
Isticmaalka shaaha ayaa inta badan ah cabbitaan, kaas oo ah cabbitaan aad u fiican oo leh midab, caraf iyo dhadhan labadaba. Caleenta shaaha ee la diyaariyey ayaa iyana aad u qiimo badan.
Qaar ka mid ah adeegsigaas ayaa hadda loo soo bandhigay sida soo socota:
1. Ukunta shaaha kari.
Qaar waxay u isticmaalaan caleemo shaah la kariyey si ay u karkariyaan, qaarna waxay isticmaalaan budada shaaha. Waxaa ugu fiican in la isticmaalo shaaha madow. Shaaha madow ee caadiga ah waa raqiis, caleemaha shaaha la kariyeyna waxay leeyihiin midab ukun casaan ah iyo dhadhan macaan. Furaha ukunta shaaha ee la karkariyey ayaa ah in marka hore la kariyo ukunta, qolofka ukunta si fudud loo jebiyo, ka dibna caleemaha shaaha biyo lagu shubo oo sii wad sii karinta si shaaha looga dhigo mid aad u macaan.
2. Samaynta barkimo shaaha.
Ha iska tuurin caleenta shaaha ee la isticmaalay, ku fidiya sabuurad alwaax ah oo qallaji, oo ururso, taas oo loo adeegsan karo barkimo barkin. Waxaa la yiri maadaama shaaha uu dabeecad ahaan qabow yahay, barkimaha shaaha ayaa maskaxda qaboojin kara oo hagaajin kara awoodda fikirka.
3. Iska celi kaneecada.
Qallajinta caleemaha shaaha ee la isticmaalay iyo kulaylkeeda xagaaga ayaa iftiimin kara kaneecada. Waxay leedahay saamayn la mid ah xirmooyinka kaneecada oo gebi ahaanba aan waxyeello u lahayn jidhka bini'aadamka.
4. Ka caawi horumarinta iyo taranka ubaxa iyo dhirta.
Caleemaha shaaha ee la diyaariyey ayaa wali leh nafaqooyin sida cusbada aan nooleyn iyo karbohaydraytyada, kuwaas oo caawin kara koritaanka iyo taranka ubaxa iyo dhirta haddii lagu ururiyo meel ubax ama dheri.
5. Madhalaysnimada iyo daaweynta cagaha cayaaraha.
Shaaha waxaa ku jira xaddi badan oo tannins ah, oo leh saamayn bakteeriyadeed oo xoog leh, gaar ahaanna waxtar u leh bakteeriyada dhegaha leh ee keenta cagta cayaaraha. Sidaa darteed, dadka la il -daran beriberi, waxay habeen walba ku kariyaan shaah casiir qaro weyn leh si ay cagaha u dhaqdaan, waxayna bogsan doontaa waqti ka dib. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagama maarmaan ah in lagu adkeysto samaynta shaaha si aad cagahaaga u dhaqdo, mana yeelan doonto saameyn weyn muddo gaaban gudaheed. Oo waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo shaaha cagaaran, shaah madow oo la kariyey, waxa ku jira tannins -ka ayaa aad uga yar.
6. Ka takhalus neefta xun.
Shaaha wuxuu leeyahay saamayn xoog leh oo astringent ah. Haddii aad mar walba afkaaga ku hayso caleemo shaah, waxaad ka takhalusi kartaa neefta xun. Isticmaalka shaah xoog leh si aad u luqluqato badanaa waxay leedahay saameyn isku mid ah. Haddii aadan ku fiicnayn cabbitaanka shaaha, waad qooyn kartaa shaaha ka dibna afkaaga ku hay si aad u yareyso dhadhanka qadhaadh oo aad u yeelato saameyn gaar ah.
7. Waxaad daryeeli kartaa timahaaga.
Biyaha shaaha ayaa ka saari kara wasakhda iyo dufanka, sidaa darteed ka dib markaad timahaaga mayrto, ku dhaq biyo shaah ah si aad timahaaga uga dhigto mid madow, jilicsan oo dhalaalaya. Waxaa intaa dheer, shaaha kuma jiraan wakiilada kiimikada mana dhaawici doono timaha iyo maqaarka.
8. Dhaq dharka xariirta.
Dharka xariirta ayaa aad uga baqa saabuunta kiimikada. Haddii caleenta shaaha ee qoyan loo isticmaalo biyo karkari si loogu maydho dharka xariirta, midabka asalka ah iyo dhaldhalaalka dharka ayaa loo hayn karaa sidii hore oo kale. Dhaqista dharka ka samaysan fiilooyinka nylon ayaa leh saameyn isku mid ah.
9. Ku tirtir caleemaha shaaha ee la isticmaalay muraayadaha, albaabada muraayadaha iyo daaqadaha, alaabta guriga, cajaladda dhejiska ah, kabaha maqaarka ee dhoobada ah, iyo dharka madow.
10. Weelka waxaa ku jira uri kalluun.
Ku rid caleemo shaah oo wasakh ah kuna kari dhowr daqiiqo si aad uga takhalusto urta kalluunka. Dhab ahaantii, isticmaalka shaaha ayaa aad uga badan kuwan, marba haddii ay u aragto inay habboon tahay, waxaa loo isticmaali karaa qashin ahaan. Waxaan rajaynayaa in jawaabtaani aysan hoos kuu dhigin!
Waqtiga dhejinta: Sep-23-2021